Hojii pirezidantummaa waggoota dheeraa Roobart Mugaabee suuraan - BBC News Afaan Oromoo
Hojii pirezidantummaa waggoota dheeraa Roobart Mugaabee suuraan
Roobart Gabri'eel Mugaabeen mana baruumsa miishiniitti erga baratanii booda barsiisummaan Yuunivarsiitii Fort Haar, Neelsan Maadellaan itti baratanirraa eebbifaman. Bara 1958 hojii gara Gaanaa deeman.
Achittis mara 1961 bultii kan waliin dhaaban Saalii Haafroon waliin wal baran. Osoo inni namoota sabboonummaa gurrachotaa qabaniin hin filamiin dura, isheetu hirmaannaa siyaasaa cimaa qaba ture. Boodarra mootummaa Roodezhiyaan waan hidhameef awwaala ilma isaa irrattillee argamuu hin dandenye.
Bara 1974 erga mana hidhaatii bahanii, namoota sirna gita bittaa gartuu bicuu irratti waraanaa gaggeessan keessaa beekamtii argatan, Jooshuwaa Nikoomoo waliin.
Marii nagaa Biriteeyin qopheessiteen hidhannoo hiikkachuuf waliigalan. Dhaaba 'patriotic front' hundeessuun filannoo Guraandhala bara 1980 gaggeeffame injiftatan, kunis warra lixaa ajaa'ibsiisee ture.
Filannicha torban jaha qofa dursanii jiruu baqaa waggoota 10'f irra turan irraa gara biyyatti kan deebi'an Roobart Mugaabeen, Mootummaa waalta'aa uumuun, Ministira Muummee ta'an.
Waggoota jalqabaa aangootti dhufan, hoggantoota addunyaa gurguddoon beekamtii argatanii turan. Fiidal Kaastiroon bara 1986 isaan daawwatanii turan.
Ministira Muummee UK kan turte Maargaaret Taachar waliinis hariiroo cimaa qabu ture - jalqabarraa diina isaanii kan turan warra adii waliin imaammata araaraa qabeenyi isaanii akka jalaa hin tuqamne taasisu hordofu turan.
Haati warraa isaanii jalqabaa akkuma duuteen, bara 1996 barreessituu isaanii Girees Maruufuu ijoollee lama irraa godhatan fuudhan. Bara 1990'n keessa waraana Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo keessa ture irratti hirmaachuun diinagdee biyyattii daran miidhe.
Bara 1997 hidhattoonni Mugaabee deeggaran lafa qonnaa warra adiin dhuunfatamee ture weeraruu eegalan. Kunis erga mootummaan UK Toonii Bileeriin durfamu marii riifoormii lafaa biyyattii keessaa of baaseenbooda ture.
Paartii isaanii Zanu-PF jedhamuun waggaa waggaan guyyaa dhaloota isaanii kabajuuf sirna guddaatu qohaa'a.
Kunis Keekiiwwan gurguddoo maallaqa hedduun hojjachiisuu dabalata
Beekamtiin qaban yeroo gara yerootti gadi bu'aa dhufee bara 2008 filannoo irratti injifataman.
Lammiileen biyyattiis aangoo akka gadi dhiisu gaafachuu eegalan.
Haa ta'u malee hanga haati warraa isaanii gara aangootti dhufuu akka barbaaddu mirkaneeffatanii tirbee darbe keessa biyyattii to'ataniitti humni waraanaa biyyattii Mugaabeef amanamoo turan.
Humni waraanaa biyyattii to'atus, Mugaabeen aangoo gadi dhiisuu didan. Eebba barattootaa yuunivarsiitii haraaree irrattis argamanii haasawa godhanii turan.
Boodarra garuu, hiriira mormii cimaa fi seera baastonni adeemsa aangorraa isaan buusuu wayita eegalan aangoo gadi dhiisuu isaanii beeksisan. Kunis lammiilee biyyattii hedduu biratti gammachuun simatame.
Suuraaleen hundi mirgi abbeentaa eerameera.